Ini handikwanise kuisa password yangu muTerminal application | Ndinobva mac
Nei ndisingakwanise kuisa password yangu muTerminal app
chiteshi Ichi chishandiso chinobatanidzwa nema Mac Mac masystem. haifanire uye haazive kudzoka kune iyo poindi yapfuura. Iyo ndeimwe yeakareruka mafomu uye isu tinogona kana kuitsanangura se "rough" asi mashandiro ayo isu ekushandisa anotipa haaverengeke. Kana iwe wakamutsa kuda kuziva kwako, kuti utange unogona kutarisa chinyorwa chakaburitswa newatinoshanda naye: Maitiro ekunyora ese ekupedzisira mirairo, kana kuwana akawanda manyorerwo pawebhusaiti yedu.
Kana tangova mukati meTerminal, tinogona kuita mirairo kuitira iyo system kuti iite chiitiko chemukati. Semuenzaniso: bvisa macache, svina RAM, bvisa zvikanganiso zvinodzivirira maitiro kubva kumhanya zvishoma, pakati pevamwe vazhinji.
Kuti uite chero chezviito izvi, zvinodikanwa kuti uwane iwo maratidziro ehurongwa hunoda pinda yedu password password. Zvakajairika, nekuti Apple vanogadzira vanoda kuti tive nechokwadi nezvatinoita uyezve kudzivirira mumwe mushandisi weMac yedu kuti asabate nekukanganisa.
Naizvozvo, kusvika parinhasi, painobvunza "password" iyo ruzivo rwakanyorwa uye isu takaona kuunzwa kwepassword nemachira. Kune rimwe divi, mukuvandudzwa kwekupedzisira kwesystem, panowanikwa izwi password uye isu tinotanga kutaipa password, iwo madota haawonekwe, kunyange kupa pfungwa yekuti chirongwa ichi chakavharirwa. Hazvina kuita seizvi, izvozvi hazvidzosere keystroke yeimwe neimwe yemakiyi epassword. Mushure mekutsikirira kupinda, iyo sisitimu inozviziva uye yatanga maitiro akumbirwa.
Ini handizive kuti nei ichiitwa nenzira iyi, asi ndinofanira kutaura kuti kusvika parizvino kupinda pasiwedhi, inoshanda sekuita kwayakanga yaita kusvika zvino. Kutangazve komputa hakuiti kuti tidzokere kunzira yapfuura futi..
Isu tinovimba kuti Apple ichatonga pane ino shanduko, iyo ichave iine chikonzero kana tsananguro iyo kusvika parizvino isu tisingazive.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Nei ndisingakwanise kuisa password yangu muTerminal app
Chikonzero chandinofungidzira kuti chakafanana nei uchinyora pasiwedhi pane chishandiso cheIOS, "mabhatani" ekhibhodi haanzwika, kungodzivirira kupa zvinongedzo nezvehuwandu hwevatambi hwauinazvo.
Izvo zvakajairika mune mazhinji eazvino zviteshi semu linux kana iTerm ye mac (bash, zsh). Izvo ndezve kuchengetedzeka: usaratidze kureba kwephasiwedi pachiratidziri.
F1 2016 mutambo ucharova Mac App Store uyu China
Vanofamba neMweya: Kutuka kweiyo Cypress Witch, Yemahara kune Yakaganhurirwa Nguva